Ingqungquthela Yonyaka Yama-2021 ye-IWCA (Oct 20-23) - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Zamazwe Ngamazwe
Ingqungquthela Yonyaka Yama-2021 ye-IWCA (Oct 20-23)
2021 Isikhungo sasehlobo
Ukubambisana kwe-IWCA ka-2021 @ CCCC
Ndawonye Futhi Sihlukanisiwe: Ukucabanga Kabusha Ngemiphakathi Yethu Yokuzijwayeza
Amalungu e-International Writing Center Association aqhamuka emazweni ahambela amazwekazi nezilwandle, futhi siyakwazisa lokhu kwehluka njengenye yamandla enhlangano yethu. Sihlanganiswa yilokho esabelana ngakho njengomphakathi womhlaba wonke wokuzijwayeza, lokho u-Etienne noBeverly Wenger-Trayner (2015) abakuchaza njengomphakathi "onobunikazi obuchazwa yisizinda sokwabelana esithandwayo." Kithina, ubulungu busho kokubili “ukuzibophezela esizindeni, kanye… namandla okwabiwe ahlukanisa amalungu kwabanye abantu” (E. & B. Wenger-Trayner, 2015). Ngasikhathi sinye, njengenhlangano yabantu, siphinde sibe yimiphakathi eminingi yemikhuba eyeqayo, ehlanganayo, futhi, kwesinye isikhathi, eyenza izinto zibe nokudideka njengoba sixoxisana ngamagugu kanye nokuhlangenwe nakho komunye umphakathi wokuzijwayeza ngenkathi sihlanganyela komunye (Wengner- I-Trayner, 2015). Kodwa-ke, kungukuhluka kwezindawo zethu ezihlinzeka ngokunotha kokuhlangenwe nakho okufanele sifunde futhi sikhule kukho. Uma kukhona okukhona, unyaka odlule awugxilisanga ukunaka kwethu kuphela kulokho esabelana ngakho njengengxenye yalo mphakathi osebenza esikhungweni sokubhala, kepha nokuthi imikhuba yethu kanye nezikhundla zethu kuthinteka kanjani ubulungu bethu kweminye imiphakathi yokusebenza - eminingi yayo isekelwe endaweni emiphakathini, emadolobheni, nasemazweni esihlala kuwo; izikhungo esisebenza kuzo; kanye nezimo zabo ezihambelana nezenhlalo nezomlando.
Ukubuyekezwa okungahleliwe kokushicilelwa kwamanje nezingcingo zenkomfa ezivela ezinhlanganweni zezingane zakithi kukhomba ezinseleleni thina - abafundisi, othisha, abafundi, abaphathi — esixoxe ngazo kulo nyaka odlule. Uma ngabe kukhona, ubhadane, lukhulise ukuqwashiswa ngokubandlululwa okungumlando nokuqhubekayo nokuncishiswa kwenhlangano amaqembu emiphakathini yethu aqhubeka nokubhekana nakho — kanye nezindlela eziningi lolu dlame / ukuthulisa okutholwa ngazo ezindaweni ezahlukene. Emhlanganweni ozoba khona kulo nyaka ngo-Okthoba, sifuna ukwazisa izinselelo umphakathi wethu wesikhungo sokubhala obhekane nazo — ubhadane oluqhubekayo lomhlaba wonke; ukuqhubeka nokuhlaselwa kwentando yeningi eMyanmar, eHong Kong nase-US; ukwanda kobugebengu obunenzondo kanye nezinxushunxushu zobuhlanga; ukonakala okungapheli kweplanethi yethu — futhi uhlole ukuthi siwaphazamise kanjani amakhono ethu okuphendula.
Ngalo nyaka odlule, sibone abantu kanye namaqembu kulo lonke ubulungu bethu-obumele izikhungo ezivela eNingizimu naseNyakatho Melika, eYurophu, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika nase-Asia-bephendula kulezi zinselelo ngezindlela ezinesizotha nezokuziphatha zokusekela konke ababhali abavakashela izikhungo zethu futhi konke abantu abasebenza kuzo. Yize eminingi yale mizamo isekelwe ezindleleni zokwazi nokuboshelwa emphakathini wethu weziko lokubhala, futhi ikhombisa imibono eyingqayizivele etholakala ekuthembekeni okuthe xaxa emiphakathini yasendaweni yemikhuba, iqiniso elicebisa futhi libe nzima umsebenzi wethu ngezindlela ezingalindelekile. Lo msebenzi ufuna ukuthi siphinde siqinisekise futhi siqale kabusha amanani ethu, ukuthi sibambeke esikhaleni esingakhululeki kwesinye isikhathi phakathi kokusho ukuthi singobani nokuthi senzani ukuthi singobani, nokuthi siphinde sibuyekeze imikhuba yethu ukunquma ukuthi basabela kanjani futhi kanjani kuzimo zethu zamanje.
Ngenkathi abaningi bethu bachitha unyaka odlule beqhelelene ngokwenyama ngaphandle kwemindeni yethu, esisebenza nabo kanye nemiphakathi, nathi sahlangana. Ubuchule nobuhlakani buqhubekile njengoba sathola ezinye izindlela zokuba ndawonye. Siyibonile imizamo yokuphendula kulo mzuzu we-kairotic ezincwadini, izingcingo zenkomfa, izitatimende zezikhundla, imikhondo yocwaningo, kanye nobambiswano olwakhayo. Futhi yizindaba zezinselelo zethu nezimpendulo zethu, ucwaningo lwethu kanye nemizamo yethu — izikhathi lapho savuka lapho sibhekene nokuphelelwa yithemba okukhulu — esifuna ukuzigubha kule ngqungquthela. Njengoba sihlangana, yize sisahlukene ngokwenyama, sifuna ukwazisa, ukuhlola, nokugubha ukuthi siqhubeka kanjani nokuzicabanga njengomphakathi osebenzayo, onobuchule, obonakalisayo nocabangelayo.
Iziphakamiso zingahle zikhuthazwe (kepha azikhawulelwanga) kule micu elandelayo:
Yiziphi izinselelo isikhungo sakho esibhekane nazo kulo nyaka odlule futhi uphendule kanjani? Uthole kumiphi imiphakathi yokuzijwayeza ukukhomba izingqinamba nezindlela zokuphendula?
Izehlakalo zonyaka odlule zithinte kanjani ubunikazi bakho njengomsebenzi wesikhungo sokubhala? Zikuthinte kanjani ubunikazi besikhungo sakho?
Ngabe isikhungo sakho sixoxisana kanjani ngobulungiswa bezenhlalo / ukukhathazeka ngokubandakanya? Izimo zezinto ezibonakalayo zonyaka odlule ziwuthinte kanjani lo msebenzi? Ngabe lo msebenzi ugxile kakhulu emicimbini yendawo noma yomhlaba?
Yiziphi izimo eziphuthumayo zasendaweni eziyinkimbinkimbi izinselelo zomhlaba wonke zomsebenzi wakho wesikhungo sokubhala? Ngabe izinsizakusebenza zasendaweni nazo zisizile ekuphenduleni lezi zinselelo, noma ngabe umphakathi womhlaba wonke wokuzijwayeza ukusekele?
Ukuthuthela ku-inthanethi kube nomthelela ngaziphi izindlela ekutheni imiphakathi yasendaweni neyomhlaba wonke yokusebenza kutholakale futhi kuxoxiswane ngayo?
Yimaphi amanani esisekelo sokubhala wesisekelo kanye / noma izinkolelo ezihlala enhliziyweni yomkhuba wakho? Uziguqule kanjani ukuze ziphendule kangcono / kumongo wakho?
Yimiphi imininingwane, uma ikhona, enezinhlaka zomphakathi ezinikezwe ngokwemibono yokwenza okuhle, ukuqeqeshwa kwabasebenzi, amathuba ocwaningo, noma ukusebenzisana ezindaweni zonke?
Ukukhuthaze noma ukugcine kanjani ukuxhumana nabasebenzi bakho, ubuhlakani kanye nabafundi? Umsebenzi we-inthanethi ungenza kanjani ukuthi lokhu kuxhumana kufinyeleleke kalula kwabanye abakhishiwe?
Kukufanele kanjani ukuthi uguqule imikhuba yokuhlola ukumela umsebenzi wakho njengoba usuthuthele ku-inthanethi?
Yimiphi imikhondo emisha yocwaningo eyavela ezimweni zezinto eziguqukayo emsebenzini wethu kulo nyaka odlule?
Njengoba silindele ukubuyela kokujwayelekile, imiphi imikhuba emisha ofuna ukuyigcina futhi yimiphi imikhuba ofuna ukuyishiya?
Ingqungquthela ye-2021 IWCA izobanjelwa ku-inthanethi phakathi nesonto lika-Okthoba 18 futhi izofaka amafomethi ahlukahlukene wokwethula. Abahlanganyeli bangaphakamisa enye yezinhlobo ezilandelayo zesethulo:
Iphrezentheshini yePhaneli: Izethulo ezi-3 kuye kwezingu-4 zemizuzu engu-15-20 ngayinye kusihloko esithile noma embuzweni.
Isethulo Ngabanye: Isethulo semizuzu eyi-15-20 (esizohlanganiswa sibe yiphaneli ngusihlalo wohlelo).
Iworkshop: Iseshini yokubamba iqhaza ebamba iqhaza kwabafundi ekufundeni okusebenzayo.
Ingxoxo Ejikelezayo: Imizuzu eyi-15 yokwethula okwenziwe ngumholi, okulandelwa yingxoxo elekelelwe phakathi kwabahambele umcimbi.
Amaqembu Wentshisekelo Ekhethekile: Izingxoxo zamasu eziholwa ngozakwabo abanezintshisekelo ezifanayo, izilungiselelo zezikhungo, noma ubunikazi.
Ignite Presentation: Isethulo seminithi emi-5 esakhiwe izithombe ezingama-20 isekhondi ngalinye lihlala njalo
Iphosta Iphrezentheshini: Iphrezentheshini engenzeleli yokwenza ucwaningo lapho umethuli (aba) adala khona iphosta yokumisa ingxoxo yakhe nababekhona.
I-Work-in-Progress: Izingxoxo ezijikelezayo lapho abethuli kafushane (imizuzu emi-5 kuya kwengu-10) bexoxa ngomunye wamanje (oqhubekayo) wamaphrojekthi wokubhala wesikhungo bese bathola impendulo.
Ngenkathi izethulo zePhaneli nezabantu ngabanye zisazofakwa, kulo nyaka izinhlobo ezahlukahlukene zamaseshini zizomelwa ngokulinganayo. Iziphakamiso kufanele zifike ngoJuni 4, 2021 ngo-11: 59 pm HST (abantu abaningi bazothola isikhathi esithe xaxa, ngaphandle kokuthi useHawaii! :)
Iya kuwebhusayithi ye-IWCA (www.writingcenters.org) ukuthola imininingwane yengqungquthela kanye nakwingosi yamalungu (https://www.iwcamembers.org) ukungena ngemvume bese uthumela isiphakamiso. Xhumana noDkt. Georganne Nordstrom (georgann@hawaii.edu) ukuthola eminye imininingwane.
UWenger-Trayner, uE & B. (2015). Isingeniso emiphakathini yokusebenza: Ukubuka konke ngomqondo nokusetshenziswa kwawo. Wenger-Trayner.com.
Ukuze uthole inguqulo enobungane ephrintiwe, chofoza ku 2021 CFP: Ndawonye Futhi Ngaphandle.